China Aluminium Keychain ifektri nabakhiqizi | Kingtai
Isipho esihle kakhulu komunye wakho obalulekile. I-Lightweight ukuze ingangezi isisindo esengeziwe kukhiye wakho kodwa iqine ngokwanele ukuveza lezo ziqongo! Iketango likakhiye elilodwa elinomaka we-aluminium oqoshwe ngokwezifiso onombhalo kanye nedethi yakho yangokwezifiso yokugubha usuku lwakho lokuzalwa. Kukhona ukuthungwa kwebhulashi kumaka. Ingemuva lethegi singaphinda siqoshwe ngamagama okuqala, noma umyalezo omfushane. Khetha ukwengeza izinketho ezingemuva kumenyu eseceleni. Umdwebo uzokwenziwa ngendlela ofaka ngayo ebhokisini lombhalo.
Lezi ama-key-rings angasetshenziswa ekukhuthazeni inkampani, isikhangiso kanye esetshenziswa njengesipho sesikhumbuzo sabangane, esibonisa inani elihle lobunikazi besithombe.
Izindandatho zokhiye kungaba sebenzisa izinqubo ezahlukahlukene, ezinoqweqwe oluthambile, uqweqwe lwawo oluqinile, koqweqwe lwawo oluphrintiwe, isitembu sethusi kanye nengxubevange ye-zinc konke okutholakalayo, kanye I-PVC, i-acrylic futhi i-flexifoam. Amathuba angapheli okukhiqiza kabusha ilogo yakho!
Isikhathi sokukhiqiza: 10-15 izinsuku zebhizinisi ngemuva kokugunyazwa kobuciko.
Izindandatho zokhiye woqweqwe lwazo oluthambile zinikeza ukhiye wethu wezomnotho omkhulu kakhulu. Kwenziwe ngensimbi egxiviziwe noma insimbi enokugcwalisa okuthambile koqweqwe lwawo, i-epoxy resin coating ivikela ibheji ekuklwebheni futhi inikeze isiphetho esibushelelezi.
Idizayini yakho yangokwezifiso ingafaka imibala efika kwemine futhi ingagxivizwa kunoma yimuphi umumo ngezinketho zokuqedwa kwe-nickel yegolide, isiliva, yethusi noma emnyama. Inani elincane le-oda ama-pcs ayi-100.
2. AMA-ENAMEL KEYRINGS KANZIMA
Lawa masongo okhiye agxiviziwe agcwaliswa ngoqweqwe oluqinile lwe-vitreous, okuwenza aphile isikhathi eside ngendlela engenakuqhathaniswa. Ngokungafani okhiye abathambile koqweqwe lwawo, akukho ukumbozwa kwe-epoxy okudingekayo, ngakho-ke i-koqweqwe lwawo luguquguquka ebusweni bensimbi.
Izindandatho zokhiye woqweqwe lwazo ophrintiwe ziyanikeza nokunye okunye uma idizayini, uphawu noma isiqubulo sinemininingwane eminingi kakhulu ukuthi singagxivizwa futhi sigcwaliswe ngoqweqwe lwawo. Lawa "mandandatho okhiye we-koqweqwe lwawo" awanakho ukugcwaliswa koqweqwe lwawo, kodwa angasuswa noma aphrintwe nge-laser ngaphambi kokuthi kwengezwe i-epoxy coating ukuvikela ubuso bomklamo.
Ilungele imiklamo enemininingwane eyinkimbinkimbi, lezi zindandatho eziyisihluthulelo zingagxivizwa kunoma yikuphi ukuma futhi zize ngezinhlobonhlobo zokuqeda insimbi. Inani lethu elincane le-oda liyizingcezu ezingama-50 nje.
4. I-ZINC ALLOY KEYRINGS
Amasongo okhiye we-Zinc alloy anikeza ukuguquguquka okumangazayo kwedizayini ngenxa yenqubo yokubumba umjovo, kuyilapho impahla ngokwayo ihlala isikhathi eside inika la masongo okhiye ukuqedwa kwekhwalithi.
Njengamabheji ethu, iningi lamandandatho ethu angukhiye anezinhlangothi ezimbili. Kodwa-ke, lapho umklamo udinga umsebenzi onezinhlangothi ezimbili noma onezingqimba eziningi, khona-ke inqubo ye-zinc alloy ifika yodwa.
5. IZIKHIWO ZESIKHUMBA
Okhiye boqweqwe lwazo zonke izitayela bangagxunyekwa kuma-keyfob esikhumba ukuze kudalwe isiphetho somkhiqizo sikanokusho. Ilungele ibhizinisi lebhizinisi, i-keyfob yesikhumba esesitayeleni izoveza isigaba futhi inikeze ukubukeka okufana nomkhiqizo wakho wekhwalithi ephezulu.
Ama-keyfobs atholakala ngezinhlobonhlobo zomumo (oyindilinga, ongunxande, oyipheya, njll.) ane-gloss noma ama-matte lesikhumba aqedwayo futhi afika aphelele nokulungiswa kokhiye wendandatho ehlukanisiwe.
Okwedlule: I-Acrylic Keychain
Olandelayo: Isivuli Sebhodlela